Magnetic mota: chii, kuti inoshanda sei uye zvidzidzo | Green Renewables
Chii chinonzi magnetic motor
Kuvandudzwa kweruzivo rwemichina kuri kuwedzera kunetseka nekuwana manyuko akasiyana-siyana emagetsi asinganyanyi kusvibisa nharaunda. Nenzira iyi, iwe unogadzira iyo magnetic motor. Vanhu vazhinji havazive kuti magineti mota chii, ndeyei kana kuti inogadzirwa sei.
Nechikonzero ichi, isu tichakumikidza chinyorwa ichi kukuudza kuti chii chinonzi magineti mota, inoshanda sei, zvakanakira uye kuti inogadzirwa sei.
1 Chii chinonzi magnetic motor
3 Zvidzidzo zvakashandiswa
4 Basa remagineti mota
5 Sei zvisingagoni kushanda?
Magneto, inozivikanwawo seinjini yePerendev, injini inongogadzira kufamba, kana nemamwe mazwi, injini inomhanya isina mafuta. Chinongotora kumhanyisa kwekutanga, uye kana wangosimuka uchimhanya, inopfuurira nokusingaperi.
Vamwe vanhu vanofunga kuti inogona kuponesa pasi kubva kune simba uye matambudziko ezvakatipoteredza, asi nharo pamusoro penyaya iyi yakawanda kwazvo, uye chokwadi ndechokuti hapana muenzaniso unogona kuyambuka zvipingamupinyi zvemusika uye kutengeswa pamwero mukuru. Ndosaka paine nhaurirano yekuti magineti ichokwadi here kana kuti ngano.
Pasinei nevimbiso yedzidziso yakagadzirwa mumapurojekiti akasiyana-siyana akadai iyo Torian III yakaitwa muArgentina, kuzvidzora mu 12-volt simba zvinogoneka. Muzviedzo izvi vakashandisa magineti e-artificial neodymium pachinzvimbo pemagineti emhando yeferrite, ayo ane simba zvakanyanya.
Basa raMagneto riri nyore kwazvo. Simba remagnetism rinoshandiswa kugadzira simba, asi rinoshanda sei? Zvakanaka, zvinozivikanwa kuti kana mapango akapesana emagineti akaungana anokwezva mumwe nemumwe, asi zvinopesana, kana iwe uchiedza kubatanidza matanda mamwechete emagineti maviri. hazviite kuti vaviri ava vabate nekuti vanobvisana. Zvakanaka, magineti inoshandisa simba rinodzinga mapango maviri emagnetic kugadzira kufamba uye kushandura iyo kinetic motion kuita simba remagetsi.
Mupfungwa, simba rinosemesa iri rinogona kuita kuti vhiri rifambe nekusingaperi, kana kuti kusvika magineti arasa magineti, izvo zvinowanzotora makore mazana mana. Ndosaka tichitaura nezvesimba remahara uye kunyangwe perma simba.
Kwemakore akati wandei, masayendisiti anga achidzidza pfungwa yesimba remahara, iro simba rinogadzirwa kubva kune yakawanda uye yemahara sosi. Kunyangwe paine akati wandei mavhidhiyo senge ari pamusoro anoratidza mashandiro anoita magineti, kuyedza kwekutanga kuwana chimwe chinhu chakadai kunotangira makore anopfuura 800.
Nekudaro, fizikisi pachayo inoparadza kugona kwegineti: kana tichida magineti maviri kuti adzinge mumwe nemumwe, isu tinofanirwa kushandisa simba tichiaendesa mberi nekuparadzana, uye maererano nekuedza kwakasiyana-siyana, simba rinowanikwa kana kugadzirwa rakaenzana kana Chimwe chinhu chinodiwa kuti mota ishande.
Saka chikonzero chePerendev motors kana magineti ingano imhaka yekuti pole balance iripo saka haikwanise kuzvityaira nekuti inoda ekunze kinetic simba kuti ifambe, uye kana simba ringaite remagineti inomira rakaenzana nesimba remagineti ane simba. , chigadziro chinoshanda muchiyero chakazara.
Chero zvazvingaitika, uye kunyangwe paine nyaya yekufungidzira umo zvaigoneka kugadzira magineti mota inoshanda yakazvimirira uye inogadzira simba, kungave kufambira mberi kukuru kumunhu, kungadai kusiri simba remahara re100%., kana manyuko esimba risingaperi. Uye nei? Zvakanaka, nekuti nekufamba kwenguva magineti anorasikirwa nemagineti, nekuti nekukurumidza kana gare gare pane imwe nguva chimwe chezvikamu zvemota chaizoputsika, nezvimwe.
Mamwe manzwi anozivisa kuti kune zano remakambani emafuta nemakambani makuru emagetsi kumisa tsvagiridzo ine chekuita neiyo magineti injini kana Perendev injini. Asi, pamwe netsanangudzo dzakapfuura, zvinoratidzika kuti hapana chikonzero chekuronga, uye kuti kunyange mune ramangwana imwe nzira inogona kuwanikwa kuita kuti magnetic motor ishande, nhasi tinofanira kutaura kuti kubatsira kwemagnetic motor ingano. , kana kuti kugona kwayo kugadzira simba remahara uye risingaperi.
Izvo zviripo uye zvinoshanda, sezvo vachigadzirisa dambudziko rekuenzanisa kwemasimba, magetsi emagetsi, ayo anoshandiswa nemagetsi.
Basa remagineti mota
Chokwadi ndechekuti kana tichida magineti maviri kuti adzingisane, simba rakakwana rinofanira kubviswa nekuswedera kwavo. Iri simba rakafanana nesimba rinobudiswa nekuzviramba pacharo. Saka hapana simba rinobatsira rinowanikwa, nekuda kwekuti simba rekuunza magineti pamwe chete rinofanira kubva kune imwe nzvimbo.
Maererano nemitemo ye thermodynamics, simba harina kusikwa kana kuparadzwa, rinoshandurwa. Zvisinei, simba racho rinobva kupi kuti riswededze magineti pamwe chete? Mhinduro iri kubasa. Pakupera kwezuva, simba mufizikisi kugona kuita basa.
Kune rimwe divi, mune yekufungidzira nyaya yekuti izvi zvinogoneka, kunyangwe magineti inomiririra kufambira mberi kukuru, isu hatigone kufunga nezvesimba rinogara riripo, nekuti nekukurumidza kana kuti gare gare, zvimwe zvikamu zvaro zvinopedzisira zvakundikana nekuda kwekuramba kwemuchina. ichaparadzwa.
Saka hapana hombe yemafuta kurangana kumisa kusimukira kweiyo, kana zvichibvira, ingave nhanho hombe kumberi mukuchengetedzwa kwezvakatipoteredza: Magneto. Nhasi, zvisinei, Inongova ngano kupfuura chokwadi.
Sei zvisingagoni kushanda?
Chekutanga, chero chisingaperi chinofamba muchina chinotyora mitemo ye thermodynamics, saka tinenge tichitora simba kubva pasina. Vamwe vanopokana kuti simba rekutenderera rinowanikwa kubva kune magineti emagineti, iyo inodzima nekufamba kwenguva, izvo zvisiri izvo, kana mota ikagadzirwa inoisa magineti pasi pekunetseka uye ichimanikidza kuti ibvise magineti nekukurumidza (iyo isiri iyo kesi) ichagara kwenguva refu. Nguva shoma shoma yekutenderera nekuti simba iri ishoma. Magineti ese asingaperi anopera simba, asi zvishoma nezvishoma, saka zvinotora nguva yakareba kurasikirwa nesimba zvachose.
Saka isu tinogona kufunga kuti mune mamwe emamotor aya chete mhedzisiro inogoneka yemagineti kudzikisa kukweshera, saka nekufamba kushoma kwekutanga tinogona kuwana nguva yakawanda yekutenderera pane pasina magineti, ayo mune dzimwe nguva anogona kupa fungidziro yekuti injini haimbofi. kumira.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza nezve chii chinonzi magineti mota uye kuti inoshanda sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Chii chinonzi magnetic motor
Chii chinonzi hydroponic gardens